प्रचण्ड गर्मी ‘लू’बाट बच्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय « Khabarhub
प्रचण्ड गर्मी ‘लू’बाट बच्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
जेठको अन्तिम साता सुरु भएसँगै गर्मीको मौसमको बढ्दै गएको छ ।
सुर्यको प्रचण्ड गर्मी, हावा नचलेको समय अनि वर्षा नहुदाँको बेला गर्मीको अवस्था कस्तो होला ? तपाईले भोग्नुभएको छ भने महसुस गर्नुभयो होला ।
यस्तै बेला अधिकाशं मानिसलाई ‘लू’ लाग्ने गर्दछ । तसर्थ प्रचण्ड गर्मी र ‘लू’बाट बच्न केहि सावधानी र घरेलु उपाय अपनाएमा लूबाट बच्न सकिन्छ ।
अमलालाई उमालेर मज्जाले पिस्नुहोस् । त्यसपछि तयार भएको लेदोमा सख्खर र मह मिसाउनुहोस् ।
अब तयार भएको मिश्रणलाई दिनमा कम्तीमा ५/६ पटक पिउनुहोस् । यसले गर्मीको मारसहित पखाला, बान्ता र ज्वरोमा फाइदा पुर्याउँछ ।
२. सातुको सर्बत
मकै, जौ, चनालगायतका बिभिन्न अन्नबाट बनाइने सातु र पानीको मिश्रणबाट तयार हुने सर्बत एक स्वास्थ प्रोटिनयुक्त पेय हो । यस प्रकारको सर्बतमा उल्लेख्य रुपमा फाइबर हुन्छ । गर्मी र लुबाट बच्न सातुका साथमा ताजा फलफूल मिसाएर पिएमा तत्काल लाभ मिल्दछ ।
तरबुजा एक पोषकतत्व र अत्यधिक पानीले भरिपुर्ण फल हो । यसलाई कैयौं प्रकारबाट सेवन गर्न सकिन्छ । तरबुजा एक स्वादिष्ट फलको पनि हो । तरबुजामा पाइने लाइकोपीनले छालालाई सुर्यको अल्ट्रा वायलेट किरणबाट बचाउने गर्दछ ।
गर्मीको मौसममा स्वास्थ्य रहनका लागी नियमति एक गिलास चिसो कागती पानी पिउनु लाभदायक मानिन्छ । पानीको अभावमा हुने डिहाइड्रेटेडबाट बच्न पनि पानी र कागती उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ फ्रिजमा राखिएको कागती र चिसो धाराको पानीबाट बनाइएको पेय अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । यसमा पुदीनाको पत्ता पनि थप्न सकिन्छ ।
युरिक एसिडका बिरामी बाहेकका ब्यक्तिलाई गोलभेडा अत्यन्त स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ । गोलभेडामा भिटामिन सी पर्याप्तमात्रामा पाइन्छ । यसमा लाइकोपीनजस्ता लाभकारी फाइटोकेमिकल्स पनि पाइन्छ । जो पुरानारोगबाट विशेष क्यान्सरबाट बचाउने गर्दछ । गोलभेडाको सेवनले गर्मी र लूबाट बचाउँछ ।
प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार ११ : २४ बजे